poker efi-trano eo akaikin'ny fort lauderdale
hard rock cafe casino atsimo lake tahoe
UK Biraon'ny ara-Drariny ny Varotra (MATETIKA) dia nanapa-kevitra ny hametraka ny ara-tsosialy lalao eo ambany mikraoskaopy, amin'ny fifantohana manokana na ny ankizy ny maha-terisetra any amin'ny fandoavana ny endri-javatra fanampiny na singa poker efi-trano teo akaikin'ny grand rapids mi.
Tamin'ny volana janoary, UK filokana dalàna hoy izy ireo dia nanantena miha-malaza ara-tsosialy lalao tsena ho polisy mihitsy, fa ny MATETIKA ankehitriny dia nanapa-kevitra hanadihady na ireo ankizy na ireo ray aman-dreny no "niharan'ny tsy rariny ny fanerena mba hividy izy ireo rehefa milalao lalao nieritreritra izy ireo fa ireo maimaim-poana," araka ISAKY ny tale ambony Cavendish Elithorn. MATETIKA ny fanambarana nanamafy fa "tsy mitady ny fandraràna ao an-lalao fividianana," fotsiny mba ho azo antoka fa ny orinasa dia "manaja fitsipika manan-danja izany fa ny ankizy dia voaaro." Ny hetsika manaraka maro high-profile ohatra ny ankizy mampiasa ny ray aman-dreniny' ny carte de crédit info manao tao-fampiharana fividianana, anisan'izany ny raharaha ao Bristol izay tsy ampy taona voampanga noho £1,700 mendrika ny virtoaly entana raha milalao Zombies Vs poker efi-trano eo akaikin'ny fort lauderdale. Ninja ny iPad hard rock cafe casino atsimo lake tahoe. Paoma amin'ny farany nanaiky ny refund ny volavolan-dalàna.
Tamin'ny febroary, ny Paoma dia nanaiky ny hipetraka ho ANTSIKA ny mpianatra asa fitoriana nentin 'ny ray aman-dreny izay ny ankizy dia efa zana-tany lehibe App Store volavolan-dalàna amin'ny fampiasana ny ray aman-dreniny' kaonty hard rock cafe casino tampa ora. UK Fiarovana ny Mpanjifa avy amin'ny tsy Rariny ara-Barotra ny Fepetra 2008 lalàna mandrara ny orinasa avy amin'ny fanaovana 'mivantana ny fitalahoany' ny zaza tsy ampy taona mba fividianana hard rock cafe casino tampa bay.
Mety hampidi-doza faritra misy raha ny lalao no natao ho an'ny olon-dehibe fa ny ahitana singa fa ny ankizy dia afaka mahita manintona, toy ny King.com's Vatomamy Hanorotoro Saga hard rock cafe casino tampa florida. Ny MATETIKA efa nangataka ny ray aman-dreny sy ny mpanjifa vondrona mba hanome ohatra ny tena masiaka indrindra pitches ny ankizy' lalao. MATETIKA ihany koa ny drafitra mba mangataka barotra info avy sosialy lalao orinasa mba hanampy manangona ny tatitra, izay no andrasana mba ho voavonjy izany oktobra. Hahazo ny farany filokana vaovao avy any Calvin Ayre.